by न्युज डेस्क ३१ जेष्ठ २०७८ १३:२३ 14 June 2021 0
सामाजिक संजाल ट्विटर कुनै कलाकारलाई रातारात स्टार बनाउन होस् या कुनै कलाकारको बिषयमा चर्को आलोचना नै गर्न किन नहोस्, भारतमा निकै प्रयोग भएको पाइन्छ ।
केही दिनयता चलचित्र ‘सीता’को मुख्य भूमिकामा नायिका करिना कपुरलाई अफर गरिएको खबर सार्वजनिक भैरहेको छ । यो भूमिकाका लागि करिनाले १२ करोड पारिश्रमिक मागेको खबर पनि भारतीय मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो ।
तर, यो बिषयमा यो चलचित्रको निर्माण टिम र करिनाले केही पनि बताएका छैनन् । यो खबर सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक संजाल ट्विटरमा ‘करिना बहिष्कार’ अभियान नै चलेको छ ।
आखिर, करिनालाई लिएर मानिसहरुमा किन यति धेरै आक्रोश पैदा भएको होला ?
विशेषगरि, यो चलचित्रमा करिनाले काम गर्दा ‘सीता’को भूमिकामाथि न्याय नहुने केही मानिसहरुको वुझाई छ । यो चलचित्रका लागि कुनै हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने नायिकालाई लिन धेरैले माग गरेका छन् । कतिपय प्रयोगकर्ताले त करिना तैमुर अली खानको आमा भएकाले पनि उनले ‘सीता’को भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस्तै, करिनाले चलचित्रको पर्दामा चुरोट तान्दै गरेको फोटो सार्वजनिक गर्दै केही ट्विटर प्रयोगकर्ताले ‘सीता’ बन्नका लागि उनी फिट नभएको बताएका छन् । करिनालाई यो भूमिकाका लागि फाइनल गरेको खण्डमा बलिउडकै विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने तर्क समेत केही ट्विटरका प्रयोगकर्ताको छ । तर, यो बिषयमा करिना र यो चलचित्रको टिमले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, ट्विटरमा करिनालाई बहिष्कार गर्नुपर्ने ट्रेन्ड चलेको छ ।
SQL requests:205. Generation time:2.325 sec. Memory consumption:15.81 mb